के जात रे : कालो छ कि गोरो ? - Sabal Post
के जात रे : कालो छ कि गोरो ?
भरत खत्री – रात्री कालिन जागिर सकेर आफ्नो डेरा तिर फर्कदै थिए । हालसालै नेपालमा कोरोनाले उग्ररूप लिन थालेपछि, समाचारलाई माथिल्लो घेरामा राखेर अध्ययन गर्ने गर्छु । सदै जसो फ्लानो देशमा हालसम्मको सबैभन्दा धेरै संक्रमित, यति जनाको मृत्यु, यति जना ठिक भएर घर फर्किए । यस्तै यस्तै समाचार आउदै गर्दा पछिल्लो क्रममा नेपालमा समाचारको नयाँ टोपिक बन्यो । टोपिक निकै नै अप्रिय भए पनि बोल्नु पर्ने थियो । रुकुममा जातीय मुद्दामा लिएर मानबको क्षति भयो । जुन नेपाली समाजको लागि निकै घातक र क्षतिपूर्ण छ । नेपालको समाचार चिसो हुन नपाउदै फेरि विश्व जगतलाइ उथलपुथल पार्ने समाचार आयो । समाचार अमेरिकाको थियो । मानबको रङलाइ लिएर भएको यो बहस अमेरिका सामु निकै घातकपूर्ण साबित भयो । एक अस्वेत नागरिकको मृत्युले विश्वमा फेरि आतंक फैलियो । बिहानको तीन बज्दै थियो।।। ट्विटर खोलेर नेपाली बिबिसी नेपाली सेवामा गए, समाचार आएको रहेछ । अमेरिकामा भइ रहेको घटना बारे चिनियाँ कुटनैतिकहरुको विश्लेषण र चीन शक्तिशाली देश भएको दाबी गरेका रहेछन् ।
अहिलेसम्म विश्वमा असंख्य रुपमा युद्ध र विचारहरुको क्रान्ति भए, यी सबैको पछाडी एउटा पुरानो परम्परालाई ढालेर नयाँ परम्परा बसाउनु थियो । जातीयता र रङको बिषय नयाँ भने पक्कै हैन, यसको लागि हजारौं मानवीय क्षति भएको छ । मार्टिन लुथर किङ्ले मानिसको रङको लागि गरेको भाषण अहिले पनि विश्व सामु उतिकै लोकप्रिय् छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चार जात छतिस वर्णको देश हो भनेका थिए, यो पनि अहिले सम्म उतिकै प्रिय् छ । चाहे नेपालको जहानीय राणा शासनको विरुद्धमा होस् वा रसियामा पुजीवादीको विरुद्धमा लेलिनले गरेको क्रान्ति, सबैमा कताकता एकै किसिमको गन्ध आए झैं लाग्छ । पुस्ता फेरिदै गए पनि विचार भने फेरिन सकेका छैनन् । विश्वमा हर देशका नेताहरुले प्रायः आफ्नो भाषणमा भन्ने गर्छन । जात छन् त मात्र दुई वटा । अज स्कुल तथा विश्व बिद्यालयमा मान्छेको जात दुइवटा हुन्छन् भनेर सिकाइन्छ ।
महिला अनि पुरुष, यहाँ भनाइ र गराइमा आकाश अनि पातालको अंतर भेटाउन सक्छौं । बाहिर बस्ने नेपाली जस्ले सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ ।एकजना नेपाली . नेपाल राष्ट्र हुन्छ ।भन्नुको मतलब एकजना नेपालीको चालचलन र बानी व्यबहार बाट अन्य कुनै मुलुकको मान्छेले नेपाली यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्छ ।बिगत केही महिना अघि देखि म कोरियामा बस्दै आएको छु । मिनि नेपाल भनेर चिनिने दोङ्देमुनमा नेपाली लत्ताकपडा, खाना तथा रेस्टुरेन्टहरु प्रशस्त मात्रामा छन् । यहाँ नेपालीहरु पनि त्यतिकै रूपमा बसोबास गर्छन । सायद कोरियामा बस्ने नेपालीहरुलाइ नेपालको न्यास्रो मेटाउनु पर्यो भने दोङ्देमुन भन्दा उत्तम विकल्प अरु हुन् सक्दैन । यहाँको बसाई र नेपालको बसाईमा थोरै भिन्नता लाग्यो र लेख्छु भनेको थिए, आज लेख्ने मौका मिल्यो । नेपालमा भएको भए भाले बासी सक्थ्यो होला, हामी झस्किएर उठ्थ्यौ होला।।।आकाश खुल्न लागि सकेको छ, रात सुनसान छ , सडकमा कुदिरहेका गाडिको आवाज सुन्नी रहेको छ । कोरिया आएको केही दिनमै हल्ला सुनेको थिए, यहाँ विभिन्न जातजाति तथा जिल्लाको संगठन हुन्छ रे । त्यसो त यहाँ सबै खाले जातिजाती र समग्र नेपाल बाट नै मानिसहरु बसोबास गर्छन् । तर विभिन्न वहाना खोलिएका यस्ता संगठनले सुरुमा नेपाल बाट आउनेलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । कोरियामा बस्ने इपिएस बाट आउनेलाई भन्दा व्यक्तिगत लागानी बाट कोरिया प्रवेश गर्ने विद्यार्थीलाइ अलिक गार्हो छ, जागीर, बस्ने ठाउँ तथा सबै खाले दैनिक उपभोगिय बस्तु आफै खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यहीँ माथि भाषा प्रमुख समस्या हुन्छ, यस्तोमा जातजात बिचका संगठन र जातीय रुपमा हेरिने दृष्टिकोणले गम्भीर असर गर्छ ।
नाकसन डाडाको उकालोमा निस्क्दै छु । दिनमा अलि व्यस्त देखिने बाटो खाली छ , प्रतीक्षालयमा बसेर गफिने बुढापाकाको अनुहार झल्काउछ यो बाटोले।नेपालमा सहरमा भन्दा गाउँमा बढी जाती वाद चल्छ । त्यसमा पनि शुद्र भनेर चिनिने जातीमाथी अलि बढी हेप्या प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालको संविधानले जातीवाद लाई अग्र स्थान दिएको छ तर विडम्बना जरैबाट निर्मुल हुन सकेको छैन । कोरियामा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य वा शुद्रमा त्यति जातिबाद चल्दैन । यहाँ अलि भिन्न खाले जातिबाद देख्न सकिन्छ । जुन जातको संख्या अलि बढी छ त्यो जातले अर्को जातलाइ फरक किसिमको व्यबहार गर्ने तथा आफ्नो जातकोलाई अलि छिटो सहयोग गर्ने गर्छन् । नेपालमा रहदा अरु साथीहरु कस्तो हुन्थे भन्न सकिन्न तर कोरिया प्रवेश पछि सबैको जाती प्रतिको दृष्टिकोण बद्लिने रहेछ । यो लेखबाट स्पष्ट पार्न खोजिएको विषय भनेको हामी जातिबादको कुरा चल्दा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा दिने गर्छौं ।
विभिन्न प्रबचन तथा नारा जुलुस गर्न तमतयार रहन्छौ, गर्छौं पनि । तर मन बाट आफू कति सजक र मनै बाट मान्न तयार छौं भन्ने कुरा भुल्छौ । हामी पहिले आफू परिवर्तन भएको हेर्न चाहानौ, अरु बाट त्यो कुराको अपेक्षा राख्छौं । ूकाम भन्दा कुरा ठुला हिड्ने बेला खुट्टा लुलाू गरे पछि परिवर्तन कहाँ बाट हुन् सक्छ स्वम बिचार गर्नुहोस् त ।डेरा नजिकै बसेर मित्र रोशन र मैले सौल टावर हेर्दै, यति नजिक भएर पनि हामी त्यहाँ गएका छैनौं भन्दै गफ लडाउदै थियौं । हामी नजिकैको घरबाट आवाज आयो। पाल्ली नागा कोरियामा देखिएको वा भोगिएको यो घट्ना सतहमा देखिएको मात्र हो । यस्तो घट्ना सदै जसो जहाँ त्यही घट्ने गर्छन् आफू सचेत बनौं । जात सानो ठुलो, मान्छे कालो गोरो , मोटो पातलो केही हुदैन त्यो हाम्रो आँखाको भ्रम मात्रै हो । आनी चोयिंग डोल्माको गीतमा जस्तैः फूलको आँखामा फूलै संसार, काडाको आँखामा काडै संसारू । परिवर्तन अरु भएको हैन आफू भएको हेर्ने इच्छा राखौं । संसार परिबर्तन सिल परिवर्तन सम्भव छ । लेख लेख्दा लेख्दै फुरुङ उज्यालो भयो बाकी हजुरहरुको हातमा ।यो लेखको लक्ष्य जात वा परिवेशलाई हानी पुर्याउनु नभई समाजको वास्तविक तस्बिर छर्लङ्ग बनाउनु हो,धन्यवाद भरत खत्री धुर्कोट ३ हाडहाडे हाल : दक्षिण कोरिया
बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह
अखिल (क्रान्तिकारी) लुम्बिनी व्युरोको दुईदिने स्कूलिङ कार्यक्रम…
आज शुक्रबार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ
अमेरिकामा एकै दिन २३ हजारभन्दा बढीमा कोरोना…
सन्दीप र सुशन चम्किदा अमेरिका ३५ रनमा…